HomeKit: dhammaan jawaabaha su'aalahaaga waxaad u baahan tahay inaad ogaato | Wararka IPhone
Cristina Torres sawir-haye | | dhowr
Malaha ku saabsan HomeKit, waa mid ka mid ah tabo cusub ee Apple taas oo lagu soo bandhigay cutubkii hore ee shirkadda, waxaad horeyba u ogaan doontaa waxyaabo badan. Dhamaantoodna way wanaagsan yihiin maxaa yeelay waxay u maleynayaan inuu furmay adduunkii Cupertino, iyo wixii ka sarreeyay, oo ah sharad xiiso leh oo ku saabsan internetka waxyaabaha. Si kastaba ha noqotee, cusbooneysiinta nidaamka awgeed, wali shaki badan ayaa hawada ku jira, waxayna ku saabsan tahay iyaga waxaan dooneynaa inaan kula hadlo xigta.
HomeKit wuxuu kuu oggolaanayaa inaad abuurto xiriiro toos ah oo lagu xakameeyo walxaha noocyadeeda oo dhan. In kasta oo qufulka, laydhadhka, kaamirooyinka ama albaabada lagu muujiyey soo bandhigida rasmiga ah, haddana waxa jiri kara qaar badan oo dheeri ah oo ku dhex jira nidaamkan ay soo jeedisay Apple. Sidoo kale, waxa ugu wanaagsan, Siri wuxuu awood u yeelan doonaa inuu noqdo kaaliye shakhsi ahaaneed oo wax walba oo guriga ka jira u rogo wax adeeggayaga ah. Laakiin waxaas oo dhan, horay ayaad u ogayd. Aan u gudubno waxa laga yaabo inaadan si buuxda u ogeyn, iyo wixii ka sarreeya, shakiga ay HomeKit wali ka abuuri karto dadka isticmaala. Ma rabtaa inaad si buuxda u ogaato tikniyoolajiyadda Apple?
1 Muxuu HomeKit uga fiicanyahay qalabyada lagu xakameeyo barnaamijyada dhinac saddexaad?
2 Miyuu HomeKit ka ammaan badan yahay isticmaalka tiknoolajiyada saddexaad ee saddexaad?
3 Siri miyaa loo adeegsan doonaa dhammaan isku xirnaanta?
4 Sidee Apple u hubin doonaa amniga agabka dadka kale?
5 Ma jiraan badeecado leh HomeKit oo horey suuqa looga helay?
6 Ma jiraa barnaamij HomeKit ah?
7 Maxaan ubaahanahay inaan ku xakameeyo aaladaha HomeKit?
Muxuu HomeKit uga fiicanyahay qalabyada lagu xakameeyo barnaamijyada dhinac saddexaad?
Way cadahay taas HomeKit ayaa wax badan ka fududayn kara. In kasta oo otomaatiga guryuhu hore u gaadhay guriga oo ay jiraan aalado aan ka koontaroolno iPhone-ka, haddana runta ayaa ah in qaar badan oo ka mid ahi aanay is-qaban karin. Waxa ay tiknoolajiyaddan cusub sameyneyso waa inaad, hal dhinac, ka yeelan kartaa xakameynta shaqsiyeed kuwan, laakiin isla markaa, koox koox ayaa loo oggol yahay.
Miyuu HomeKit ka ammaan badan yahay isticmaalka tiknoolajiyada saddexaad ee saddexaad?
HomeKit waxay la timaadaa tikniyoolajiyad ka dhigaysa xogta keydinta xogta kama dambaysta inta udhaxeysa qalabka iyo qalabka macruufka. Taasi waxay xaqiijineysaa amniga weyn ee adeegsiga iyada oo la tixgelinayo in xaalado badan ay yihiin qalab lagu ilaaliyo gurigaaga ammaan, waxay macno badan u leedahay ka faa'iideysiga.
Siri miyaa loo adeegsan doonaa dhammaan isku xirnaanta?
In kasta oo ay u muuqato wax la yaab leh, Apple wuxuu awood u siinayaa isticmaalka Siri inuu xakameeyo dhammaan qalabka la soo saaray Tiknoolajiyada HomeKit. Taasi waxay ka dhigan tahay in Siri uu kuu noqon doono hagahaaga iyo kaaliyahaaga sidii aad u habeyn lahayd dhammaan tallaabooyinka suurtogalka ah.
Sidee Apple u hubin doonaa amniga agabka dadka kale?
Dhab ahaantii, dhammaan qalabka ku saleysan qaabeynta HomeKit waa inay marka hore ka helaan caddeyn rasmi ah Apple. Waa waxa loo yaqaan Apple ee loo sameeyay iPhone (MFI)
Ma jiraan badeecado leh HomeKit oo horey suuqa looga helay?
Qalabka loo yaqaan 'Lutron Caseta Laydh Starting': Waxaa laga heli doonaa Juun 2 dukaamada Apple iyo xarumaha kale ee wax laga iibsado iyo dukaamada internetka.
Insteon Hub: Waxaa laga heli karaa June 2 Amazon.com iyo Smarthome.com.
Elgato Eve Room, Eve Weather, Eve Door & Window, iyo dareemayaasha tamarta Eve: Waxaa lagu heli karaa horay-u-dalbashada Juun 2 Amazon.com iyo Walmart.com. Dukaammada internetka ee Apple bisha Luulyo.
Ecobee3 heerkulbeegga Wi-Fi ee xariifka ah: Waxaa laga heli karaa Juun Guriga Guryaha, Iibsiga ugu Fiican, iyo Amazon.com. Bishii Luulyo dukaamada Apple.
iHome iSP5 SmartPlug - Waxaa loo heli karaa horay-u-dalbasho laga bilaabo Juun 15 at iHome.com. Dukaammada kale laga bilaabo Julaay.
Ma jiraa barnaamij HomeKit ah?
Maya, dhab ahaan, si hufan sababtoo ah qaabeynta teknolojiyadda, wax macno ah ma sameyneyso. Dhamaan qalabyada la jaan qaadaya tiknoolajiyaddan ayaa laga soo saari doonaa asal ahaan qalabka laftiisa iyada oo loo marayo Siri.
Maxaan ubaahanahay inaan ku xakameeyo aaladaha HomeKit?
Waxaad ubaahantahay iPhone, iPad ama iPod Touch oo kusoo rogi kara iOS 8.1
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » HomeKit: dhammaan jawaabaha su'aalahaaga waxaad u baahan tahay inaad ogaato
Markaad dhigto "mid ka mid ah hal-abuurnimadii ugu dambeysay ee Apple" miyaad u malaynaysaa inay Apple ikhtiraacday? Dhaqan ahaan kani horeba wuu uga jiray noocyo kale. Ha noqonin qof fanboy ah
CustomNotificationSound waxay kuu oggolaaneysaa inaad habeysid ogeysiisyada